Gary Neville Oo Tilmaamay Xiddig Muhiim U Ah Man United Oo Keydka Lavatory - Axadle Wararka Maanta
Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa qaba in garabka weerar ee kooxdiisii hore ee Marcus Rashford uu keydka geli karo kulanka kama dambaysta ah ee UEFA Europa League ee ay Villarreal 26-ka bishan ku balansan yihiin.
Crimson Devils ayaa toddobaadka dambe kahor tagaya Villarreal, tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa wajahaya go’aano adag oo ay tahay inuu ka gaadho safafka daafaca iyo weerarka uu xulanayo.
Walow uu Rashford 21 gool xilli ciyaareedkan soo dhaliyay oo ay ku jiraan 8 gool oo uu Yurub ka dhaliyay (6 Champions League ah iyo laba Europa League ah) haddana 17-kii kulan ee ugu dambeeyay ayuu kaliya 3 gool usoo saxeexay.
Waxa jira tartan xoogan oo ka jira safka weerarka United iyadoo Paul Pogba uu si joogto ah garabka bidix uga soo muuqdo halka Mason Greenwood uu kulamo badan kusoo bilawdo garabka midig iyadoo Bruno Fernandes uu ka dambeeyo Edinson Cavani.
Neville ayaa sheegay inuusan garanayn sida uu shaxda kulanka ka dhacaya magaalada Gdansk ugu haboon yahay Rashford isaga oo xusay in Greenwood uu garabka midig kaga fiican yahay sidoo kalena uusan Pogba fadhiyi doonin.
Neville ayaa yidhi “Waxaan la yaabanahay haddii tani ay noqon karto shaxda Remaining-ka Europa League ee Man United (Shaxdii kulankii Fulham), means i cajab gelin doontaa”
“Rashford marka uu garabka midig ka ciyaayo ma shaqeeyo, waxaan filayaa in Pogba uu ciyaari doono, waxaan filayaa in Cavani uu afka hore ka ciyaari doono, waxaan filayaa in saddexda khad dhexe ay dooran yihiin”
“Waxaan ka werwerayaa in Rashford laga tago laakiin waxaan filayaa inuu Greenwood isaga halkaas (Garabka midig) kaga fiican yahay, isku dheelitirku sidaas ayuu kaga fiican yahay”